I-AT & T ethandekayo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 5, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
AT & T othandekayo,
Sele ndingumthengi wakho. Ndineefowuni zasekhaya kunye neDSL ngawe (ngaphambili i-SBC). Ndiyayithanda inkonzo kodwa ndinqwenela ukuphucula i-DSL kunye nokusebenzisa ithuba lenkonzo yeTV onayo. Uyabona, indlu yam inikezela kuphela iphakheji esisiseko kwaye ndingathanda ukuyiphucula.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, uthumele ezinye I-imeyile ethe ngqo ngokukhawuleza ndicela ukuba ndihlaziye. Ndizifumana kube kanye ngenyanga zibhekiswe ngokufanelekileyo kwindlu yam. Ngenyanga enye ude wathumela incwadi enemibala epheleleyo echaze zonke iipakeji zeDSL kunye neTV. Undifumene… ndithengisiwe! Ndifuna ukuphucula i-U-Verse ukubona iiColts ziphumelela ngeCawa kulo lonke uzuko lwabo oluhle.
Nantsi into ondibonisa yona… kwaye ndilungile!
Ke, ndindwendwela I-AT & T.com kwaye ucofe kwiqhosha lokuPhucula ngoku. Doh! Kuqala kufuneka ndijonge ukufumaneka. Ndiyazi ukuba iyafumaneka, nangona, kuba ummelwane wam # 1324 wayenenkonzo ngaphezulu konyaka (wafuduka). Oko kukwibali lesithathu… ndikwibali lesibini. Ke, ndingenisa idilesi yam kunye nenombolo yomnxeba…
Umbuzo wam wokuqala, othandekayo i-AT & T, kutheni ungathumela iintengiso kwidilesi yam yonyaka ophelileyo ubuza ukuba ndinyuse inkonzo yakho ukuba ayifumaneki ngokwenyani (endiyaziyo ayiyonyani). Uchithe intywenka yemali kule barrage yemeyile ethe ngqo. …
Kulungile… ndigqibe ekubeni ndithathe enye indlela. Ndicofa incoko kwi-Intanethi ngoku inkonzo kwiphepha lakho. Ndikulayini kunye nabathengi abali-15 abalindileyo. Ndicinga ukuba ungaphosa ngoku. Ndicofe kufutshane nefestile kwaye ndigqibo kuthatha umnxeba endaweni yoko. Ndicofa Nxibelelana nathi… ngombulelo uneenombolo zefowuni ezikhoyo.
Ifowuni iyaphendula ngelizwi elizenzekelayo kwaye icela ukuba ndifake inombolo yam yefowuni. Ndiyavuma. Emva koko iyandibuza ukuba ndingathanda ukwenza ntoni, ndathi ngononophelo "Fumana i-U-Vesi" ndicinga ukuba "U-Vesi" sisandi esihle sokubamba. Hayi hamba… “Uxolo, andisiqondi isicelo sakho.” Ngoku ndiyakhathazeka kancinci. "Nyukela kwi-U-Verse"… esebenzayo.
Inkqubo indixelela ukuba andinakuphucula, ndinetyala lokulinganisa ngasemva. Ke, ndiyibhatala ngefowuni ngekhadi letyala ngokuchwetheza onke amanani am. Ndifuna ukwazi ukuba kutheni ungandixelelanga kwiphepha lewebhu apho ndingene khona ndacela inkonzo.
Ngapha koko, ndiqhagamshelene nommeli, uShannah, kwaye uyamangalisa. Sinentetho encinci malunga neeColts ezibetha abaNgcwele kule mpelaveki. Undixelela ukuba umyeni wakhe ungumlandeli weBhele. Ndiyabuza, "Ngaba basekho kwiNFL?". Wafumana intsini kuloo nto. Undixelela ukuba inkqubo yakhe ayifumaneki. Ndimxelela ukuba ummelwane wam unayo kwaye ubuza idilesi yabo. Kufuneka ndiphume endlwini, ndinyuke izinyuko, ndifumane inani. Ndibuyele emva ndaza ndamxelela # 1324.
Uyaqhubeka kwaye ucinga ukuba wenza inkqubela phambili. Ndonwabile. Emva koko umnxeba uyekisiwe.
Akukho mntu ubuyela emva… Ndicinga ukuba le nkqubo khange ilandelele inombolo yam kwaye andinandlela yakufumana iShannah ngoku ukuqhubeka nokulandela. Ndizamile ukufowunela umqhubi okwesibini kodwa ngoku bekukho nokulinda kwakhona.
Ke… ndindwendwela iwebhusayithi kwakhona kwaye ndigqibe kwelokuba ndibhale i-imeyile. Ndicofa uqhakamshelane nathi emazantsi ephepha kwaye uchwetheze “nyukela kwiU-Verse” kwicandelo elikhoyo. Ndicofa ukungenisa kunye nokuphinda ulayishe iphepha ngokukhetha ii-imeyile ezimbalwa apha ngezantsi. Ndicofa ukhetho lokuqala lwe-imeyile… kwaye endaweni yedilesi ye-imeyile okanye ifom, ndinikwe ikhonkco elibuyela kwi-U-Verse web site. Yiloo ndawo ndandisele ndikho.
Indenza ukuba ndibenomdla wokuba ukhe wenza uvavanyo lomsebenzisi kwindawo yakho ukufumana ukuba kulula okanye kunzima kangakanani kubaxumi bakho ekusebenziseni iinkonzo zakho ezikwi-Intanethi. Ndiyazibuza ukuba mangaphi amakhulu okanye amawaka abanye abathengi abazimisele ukuhlawula ngaphezulu kwaye babe ngabathengi abaxabisekileyo kumbutho wakho- kodwa abanako.
Apho unayo, i-AT & T. Ndingumthengi (ngaphambili) onwabileyo onqwenela ukuphucula iakhawunti yakhe. Ndiwabhatalile amatyala am, ndinemali, kwaye ubuthengisa kum ukuba uyenze iminyaka embalwa. Ufuna ngenene ukuphucula, akunjalo? Ukuba uyayenza, iwebhusayithi yakho ayilungiswanga, incoko yakho ekwi-Intanethi ayigcini, inkqubo yakho ayichanekanga, kwaye nenkqubo yefowuni yakho (ngokungaqhelekanga) inokuba ilahle umnxeba wam.
Ndikulungele xa ulapho.
Ngokucacileyo, ayisiyo namhlanje.
tags: ukuthenga iholidehtaccess kwakhonaukuvavanywa kwezinto ezininziUkulungiswa kolwimi lwendalostrip ifoldaQinisekisa!WordPress
Feb 6, 2010 ngo-10: 36 AM
Ndinamava afanayo nge-u-vesi. Yinto entle. Ndiyifuna kakubi. Ndifumene ii-imeyile kunye nokufowuna ngomnxeba malunga nayo. Inkonzo ayifumaneki kwindawo yethu. Lilonke, andikaze ndibone inkampani imbi kangaka ekukhonzeni abathengi bayo.
Epreli 30, 2011 ngo-6: 27 PM
Ngokuqinisekileyo kuyavakala njengengxaki. Ngaba ukhe wagqiba ukufumana uhlaziyo obulukhangela? Ngokwam, ndingathanda ukunamathela kwinkonzo yenethiwekhi ye-DISH. Kudala ndibhalisile kwaye kutshanje nam ndiye ndangumqeshwa. I-DISH isenamajelo e-HD amaninzi kunaye nawuphi na umntu okwishishini kunye nezivumelwano ezintle njenge-HD yasimahla ebomini. Kwaye kukho ezinye izinto onokucinga ngazo nazo, umzekelo ukuthembeka. Xa ufumana lonke ukonwaba / iinkonzo zonxibelelwano ezivela kumthombo omnye, ukuba umntu uphelile, zonke ziyakwenza. Ubuncinci ukuba enye yeenkonzo zam ine-hiccup ndisenokonwabela ezinye.